सरकार भन्छ विदेशमा अन्त्येष्टी गर्न देउ:विदेशमा रहेका नेपाली भन्छन् हाम्राे टाउकाकाे मुल्य ताेकियाे। – Namaste Dainik
May 11, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सरकार भन्छ विदेशमा अन्त्येष्टी गर्न देउ:विदेशमा रहेका नेपाली भन्छन् हाम्राे टाउकाकाे मुल्य ताेकियाे।
सरकारले विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको परिवारसँग विदेशमै शवको अन्त्यष्टि गर्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको छ ।
विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शब ल्याउन चासो नदिएको सरकारले शबहरु त्यस्तो अनुमति दिए सम्बन्धित परिवारलाई सान्तवना/राहत स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
अहिले विदेशमा करिब १११ जनाभन्दा बढीको शब अलपत्र छ । कोभिड-१९ लागेर मृत्यु भएकाहरुको अन्त्यष्टी विदेशमै हुने भएपनि अन्य कारणले मृत्यु भएकाहरु परिवारले शव नेपाल आउने प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
तर,वैदेशिक रोजगर बोर्डको सचिवालयले उनीहरुको शब विदशेमै अन्त्यष्टि गर्ने अनुमति दिन परिवारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । बोर्डले सोमबार एक सूचना निकालेर विदेशमै रहेका आफ्ना नजिकका हकदारबाट अन्त्यष्टीका लागि सहमतिपत्र दिन आग्रह गरेको छ । श्रममन्त्री स्तरकै निर्णयबाट बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिवनध लागेपछि निधन भएका कामदारका परिवारलाई यस्तो सुविधा दिने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।
अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धित छ । नेपालमा दैनिक दुई श्रमिकको शव भित्रिने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
कोरोनाबाट मृत्यु भएकाबाहेकको शव परिवारको सहमतिबिना विदेशमा अन्त्येष्टि गर्न पाइँदैन । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा ती शव कहिले नेपाल आइपुग्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
सरकारकाे याे पत्र पढेपछि बिदेशमा रहेका नेपालीहरु निराश भएका छन् । उनीहरुले बिभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । सामाजिक संजालमा उनीहरुले आफ्नाे भनाइ राखिरहेका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुकाे बारेमा जानकारी दिने र उनीहरुकाे दुखमा मल्हम लगाउने श्रमिक संजालले बैदेशिक“रोजगार बोर्डको सचिवालयले बिदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका लास बिदेशमै दाहसंस्कार गर्ने अनुमति दिएको खण्डमा श्रमिकका परिवारले ५०,००० रुपैँया पाउनेछन् भनेर यो सूचना निकालेछ । के छ तपाईँको बिचार ?आफ्नो बिचार कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ । केही तपाईँका बिचार हामी आजको लाईभमा राख्ने कोसिस गर्ने छौँ ।”भनेर प्रश्न साेधेकाे थियाे । उक्त्त प्रश्नकाे उत्तर दिदै फेसबुकमा बिभिन्न कमेन्टहरु आइरहेका छन् ।
फेसबुकमार्फत रबिन्द्र जंग शाही भन्छन्,”रुपैयाँ ठुलो कुरा होइन बाचेपछी जतिसुकै कमाउला नकमाउला तर पहिला बिदेश मा रहेका विभिन्न आपतबिपत मा परेका दुखमा खान नपाएकाहरु जसलाइ कोरोना सङ्क्रमित छैन र सङ्क्रमित हुने सम्भावना धेरै छ जो घरमा जान चाहन्छ सबैको उचित ब्यबस्थापन गरि घरमा फर्काइयोस श्रमिकहरुको लास माथि राजनीति गरि पैसा को बार्गेनिङ नगरियोस सरकर ।
त्यस्तै प्रेम गुरुङ् लेख्छन्,“यो नेपाल सरकारले बिदेशमा बस्ने नेपालिको मुल्य पचास हजार तोकिएको छ। के बिदेशमा बस्ने श्रमिक,प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई भुमिगत हुदा कति लाखको टाउको को मुल्य तोकिदिएको थियो? कति छ बिदेशमा काम गर्ने मान्छेको इन्स्योरेन्स त्यो पनि सबै श्रमिको परिवरलेव पाउछ या पाउदैन??यो पनि खुल्ला किताब होस!”
अर्का प्रयाेगकर्ता कुमार श्रेष्ठ लेख्छन्,“भनेसि हाम्रो लासको मुल्य 50 हजार?उबेला प्रचण्डको टाउको मुल्य तोक्नेहरु आज हाम्रो मृत्यु परान्त लासको मुल्य तोक्ने भैसकेछ? वाह रे कमाउनिष्ट हो,हामि खाडिवालाहरुको लास मा नि भन्सार लागाउ र देश सम्बृद्ध बनाउ अब लाचारि लम्पसारवादि हो छिमेकिले सिमा मिच्दा चु नबोल्ने अहिले बिपत मा उद्धार गर्नु साटो,प्रदेशमा मृत्यु वरण गरेका को लास लाई सुरक्षित तवर ले स्वदेश ल्याई बियोग र दुख खेपेका परिवार लाई गएको सास नभए नि लास भए नि ल्याई घाउ मा मलम लगाउनु पर्ने मा लास संग सम्झौता गर्दै छौ? थुईक्क”
बल्ल सोनिकाले पारसको १२ लाख खाएको आरोप र पारसको डिभोर्सको हल्ला बारे यसरि मुख खोलिन (भिडियो हेर्नुहोस )